Fironana amin'ny famolavolana tranonkala: aingam-panahy ho an'ny lohateny famoronana | Famoronana an-tserasera
Fironana amin'ny famolavolana tranonkala: aingam-panahy ho an'ny lohateny famoronana
Ny fampiasana ny volavolan-tranonkala dia fironana, izay tsy azo ihodivirana dia mahazo toerana ambony kokoa rehefa mandeha ny andro ary ampahany lehibe amin'ireo fironana ireo miroborobo tokoa noho ny fandrosoan'ny teknolojia izay mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny fotodrafitrasa bebe kokoa amin'ity sokajin-tranonkala ity.
Androany dia hitantsika ny saika "mety maty rehetra”Afaka miditra amin'ny tranokala ianao raha tsy misy fahasarotana bebe kokoa. Izy io dia dingana iray izay mitranga ao anatin'ny segondra, izay mamela ny mpampiasa azy hankafy ny atiny fialamboly na fikarohana avy hatrany, marina ary maimaim-poana.
1 Fomba entanim-panahy rehefa mamorona lohateny
Fomba entanim-panahy rehefa mamorona lohateny
Ho an'ny maro, ny tranonkala dia mety ho toerana tena tsotra, toy ny tamba-jotra sosialy na bilaogy misy fampahalalana somary misongadina. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa, na dia tsy miseho ho sarotra kokoa aza, ireo karazana tranokala ireo dia mampihatra teknika maro ho an'ny fampandrosoana ny lohanao.
Ny lohateny no lafiny voalohany hitantsika amin'ny pejin-tranonkala, dia io rafitra izay hitantsika eo an-tampon'ny pejy. Ny andraikitry ny lohan'ireto lohateny ireto amin'ny Internet dia mety hamaritra raha afaka mijanona avy hatrany ny mpampiasa na miala amin'ilay tranokala voalaza. Noho io antony io dia mety singa iray tena lehibe rehefa mamolavola.
Amin'io lafiny io dia hanolotra toro-hevitra vitsivitsy eto izahay aingam-panahy amin'ny lohatenin'ny tranonkala, amin'ny fomba ahafahan'ny mpampiasa misafidy ireo singa ireo rehefa manao ny lohatenin'ny tranonkalany.
Ny sary no singa fampiasa indrindra amin'ny lohateny. Raha toa ka anisan'ny safidintsika amin'ny lohatenin'ny tranonkala isika, dia ampirisihina hiezaka ny tsy hamono azy io loatra. afaka mampihatra antsipiriany kely izay mahatonga ny lohatenintsika ho zavatra hafa, io dia mety ho loko mamirapiratra, sary fanampiny na singa sary iray izay misarika ny sain'ny mpitsidika.
Izy ireo dia ho manan-danja amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fifandraisana misy antsika amin'ireo mpitsidika anay.
Ny lamina dia mahatonga ny pejin-tranonkala ho zavatra mampiavaka azy, noho izany zava-dehibe ny hitazomana ao an-tsaina ny karazana fanontana izay tianao homena ny lohanay rehefa mamolavola ireo lamina mifandraika amin'izany. Na amin'ny alàlan'ny tsipika na tarehimarika mihoampampana, dia tsy maintsy jerentsika amin'ny antsipiriany ny momba ny tolo-kevitr'ilay tranonkala mba hanaovana ireo fampisehoana ireo.
Mamorona lamina, ilaina ny miditra tutorial maro misy amin'ny Internet.
Ny mombamomba ny lohatenin-doha dia mazàna aseho sary ary tsy mila fahalalana bebe kokoa noho ny an'ny ity amboary ny fiavian'ilay lohateny.
Mety indrindra ny mahita ny sarinao, zavatra iray izay ananantsika ihany ary, amin'io lafiny io, ny lohatenintsika dia afaka manolotra, lasa lasa mampiavaka kokoa an'ireo olona an'arivony tapitrisa an-tranonkala ankehitriny. Raha tsy izany dia maro banky sary tranokala, izay azo ampiasaina amin'ny karazana tranonkala isan-karazany, amin'ny fiheverana ireo tsiro sy fironana sasany.
Raha tsy afa-po amin'ny sary ianao, dia mety ho ilaina tokoa ny mijery horonantsary iray, izay azonay niraikitra tamin'ny lohanay ihany koa, tamin'ny fomba nidiran'ny mpampiasa an'ity tranonkala ity, ny video no zavatra hitany voalohany.
Angamba ity video ity dia zavatra midadasika be, saingy tsy maniry ny hametra ny tenanao amin'ny sary iray ianao. Avy eo, ny safidy tsara indrindra dia ny sarimiaina, ny fomba tsotra sy haingana indrindra hifaneraserana amin'ireo mpampiasa. Na eo aza ny fotoana efa ananan'izy ireo amin'ny tsenan'ny famolavolana sy ny sarimiaina, dia mbola miteraka fahatsapana fanavaozana eo amin'ireo sehatra ahafahana mahita azy ireo, noho izany, azontsika atao ny mandray an'io karazana loharano io rehefa mamorona lohateny ho an'ny tranokalanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Fironana amin'ny famolavolana tranonkala: aingam-panahy ho an'ny lohateny famoronana
Fanasana amin'ny mariazy maimaim-poana